Kheyre oo Baydhabo ka dagay Iyadoo Shariif Xasan Kismaayo laga sugaayay Maxaase soo kordhay? – Kismaayo24 News Agency
Ra’isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomalia mudane xasan cali kheyre iyo Wafdi uu hoggaaminaayo ayaa maanta barqadii gaaray Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Ra’isul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaraddaha ee shaati gaduud International Airport ku soo dhaweeyay Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan.
Ra’isul wasaaraha ayaa la sheegay in uu baydhabo tagay ka qeyb galka Aaska allaha ha u naxariistii Hooyada dhashay Guddoomiyaha Golaha shacabka Mursal shiikh c/raxmaan oo shalay ku geeriyootay Magaalada Baydhabo.
Aaska kadib Ra’isul wasaare kheyre iyo Shariif Xasan ayaa kulan albaabada u xiranyihiin waxa ay ku yeelan doonan madaxtooyada Koonfur Galbeed iyadoo kulanka intiisa badan diiradda lagu saari doono xaaladda dalka iyo Wada shaqeynta dowladda federaalka kala dhaxeysay Dowlad goboleedyada .
Shariif xasan oo lagu wado in uu kismaayo gaaro maanta galinka dambe ayaa ka hor inta uusan baydhabo ka ambabixin wuxuu Kheyre kala shiri doonaa sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland oo waayadaanba khilaaf uu harreeyay.
Axmad Madoobe oo culeys xooggan wajahaya ayaa carrada uu ka qaaday kacdoonka shacabka uga furmay wuxuu kala dul dhacay dowladda dhexe isagoona kismaayo u diiday in ay cagta saaraan mas’uuliyiin ay dowladda u magacowday Ciidanka xoogga dalka ee Jubbaland ku sugan.
Shariif xasan oo qudhisa wajahaya culeyso siyaasaddeed oo dhanka doorashada uga imaaneysa ayaa haddanan wuxuu ka caga jiidaya in uu ka qeyb galo shirka kismaayo ay ku yeelanayan madaxda maamul goboleedyada.
Halkaan Hoose ka Daawo Muuqaalka Xog Buuxda oo Xasaasi ah
Daawo: Mas’uuliyiin, Askar iyo Carruur ku geeriyotay Qaraxii Xarunta Dagmada Howl-wadaag
Golaha wasiirrada Soomalia oo ansixiyay Xeerka Xayiraadda Lacagaha
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Eng Yariisow oo kulan wadatashi ah la qaatay Culumada Soomaaliyeed+Sawirro
admin 22nd February 2018 22nd February 2018
SAWIRO: Haweeney guursatay Dumar kale oo lagu qabtay magaalada.
TOP NEWS: Ciidamada Dowlada oo la wareegay Deegaanada Masaajid Cali guduud, War gaadhi,Nuur dugle, Cad caddeey iyo deegaano kale
admin 5th May 2016 5th May 2016